Adf.ly Account ဖွင့်နည်းနှင့်ဝင်ငွေရှာနည်း ~ Earning Online Myanmar
PAYING PTC/BTC SITES
Home » How To Earn » Adf.ly Account ဖွင့်နည်းနှင့်ဝင်ငွေရှာနည်း
Adf.ly Account ဖွင့်နည်းနှင့်ဝင်ငွေရှာနည်း
Free7Movies7:35:00 AM5comments
Adf.ly နဲ့ပိုက်ဆံရှာနည်း မြန်မာ.နည်းပညာဝက်ဆိုဒ်တွေကနေ ဖိုင် ဒါမှမဟုတ် ဆော.၀ဲလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်းလုတ်လိုက်တဲ. အခါမှာ အရင်ဆုံးတွေ.ကြစမြဲဖြစ်တဲ. လင်. ကတော. Adf.ly ဆိုတဲ. လင်.ပါပဲ . . . အဲဒီတွေ.တွေ.နေရတဲ. Adf.ly လင်.တွေကနေ ပိုက်ဆံရအောင် လုပ်နိုင်တဲ. နည်းလမ်းတွေကို တင်ပြသွားပါ မယ်. . . ဘလော.ဂ်တစ်ခုရေးတတ်ဖို.မလိုအပ်ပါဘူး သင်မြင်မြင်နေတဲ. ဖေ.ဘုတ်က လင်.ခ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ youtube က သီချင်းလင်.ခ် တွေကို ပဲဖြစ်ဖြစ် adfly မှာ Shrink! လုပ်ပြီး သူပေးလာတဲ. လင်.ခ်ကို မိမိဖေ.ဘုတ် ၊ ဘလော.ဂ်မှာပြန်တင်ရုံနဲ. အလွယ်တကူ ပိုက်ဆံရယူနိုင်ပါတယ် ... Adflyနဲ.အလားတူပဲ လွယ်လွယ်လေးပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ. shorten url ဆိုဒ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ.ထဲမှာမှ တကယ်တမ်းပိုက်ဆံအပေးကောင်းတဲ. ဆိုဒ်တွေကတော. Adfly, Linkbucks, Adfoc.us, Shorte.st, bc.cv, Cashfly နဲ. Adlockတို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်အကြီးဆုံးတွေကတော. Adfly နဲ. Adfoc.usတို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1. ဘယ်လိုပိုက်ဆံရှာလို.ရလည်းဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ. သူများအတွက် အရင်ဆုံး Register လုပ်ဖို. ဒီအောက်ကလင်.ခ်/ဓာတ်ပုံမှာ နှိပ်လိုက်ပါ။ တဆင်.ချင်းစီ ရှင်းပြပါမယ်။
2. ပြီးရင် အောက်ကပုံအတိုင်း Join Now ဆိုတဲ. စကားလုံးပေါ်နှိပ်လိုက်ပါ။
3.နှိပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဒီအောက်က form တက်လာပါတယ်။
Your Name နေရာမှာ ကိုယ်.နာမည်ရေးထည်.လိုက်ပါ Username နေရာမှာ ကိုယ်.ကြိုက်တဲ. နာမည်ပေးပါ Email အီးမေးလ်ထည်.လိုက်ပါ Retype Email နောက်တကြိမ် အီးမေးလ် ထပ်ရိုက်ထည်.လိုက်ပါ Password စကားဝှက်ပေးလိုက်ပါ Retype Password ဒီစကားဝှက်ပဲ နောက်တခါပြန်ရေးပေးလိုက်ပါ Human Check အမည်းရောင် စကားစု ၂ ခုကို အောက်က ပလာကွက်ထဲမှာ ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ Account Types မှာတော. ဘာမှ ပြင်စရာမလိုပါဘူး I agree to the terms and conditions ရှေ.မှာ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ နောက်ဆုံးတော. Join ကို နှိပ်လိုက်ပါ ဒီပေါ်က ပုံကိုမြင်ရပါမယ် ၃ရက်အတွင်း ကိုယ်.Gmail အကောင်.ထဲဝင် ပြီး Activateလုပ်လိုက်ဖို. မမေ.ပါနဲ.လို.ရေးထားပါတယ် ဒါကြောင်. ကိုယ်မေးလ်ထဲ ကိုယ်ဝင်ပြီး စစ်ကြည်.လိုက်ပါ။
မေးလ်ထဲမှာ အပေါ်က ပုံအတိုင်းမြင်ရပါမယ် အ၀ါရောင်ဝိုင်းထားတဲ. စာသားကို နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အစိမ်းရောင်စားသားကို ကော်ပီကူးပြီး အ၀ါရောင်ဝိုင်းထားတဲ. စားသားကို နှိပ်လိုက်တဲ. အခါ တက်လာတဲ. ပလာကွက်ထဲ ပြန်pasteချလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Confirm Registration ကို နှိပ်လိုက်ပါ အောက်ကပုံမြင်ရပြီဆိုရင် register လုပ်ခြင်းပြီးသွားပါပြီ။
ပိုက်ဆံရအောင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရသလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ. သူတွေ နောက်ခေါင်းစဉ်တွေကို ဆက်ဖတ်သွားလိုက်ပါ။ နောက်ခေါင်းစဉ်ကို မသွားခင်မှာ Adfly နဲ. ပိုက်ဆံရှာနိုင်မယ်. နည်းလမ်းတွေကို အကျဉ်းချုံး ပြောပြပါမယ်။ Adfly နဲ. ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ. နည်းလမ်း ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။ ၁.Shrink! လင်.ခ်ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း ပိုက်ဆံရတဲ.နည်းလမ်း ၂.Website Entry Script ၀က်ဆိုဒ်ဝင်တိုင်းငွေရတဲ.နည်းလမ်း ၃.Full Page Script ဘာကိုပဲနှိပ်နှိပ် ပိုက်ဆံရအောင်လုပ်နည်း ၃ ခုစလုံး ပေါင်းစပ်ပြီးလည်း ပိုက်ဆံရှာနိုင်ပါတယ်။ သူ.အားသာချက်နဲ.သူ ရှိပါတယ်။ >>>ကိုယ်စိတ်နှလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ<<< ပထမနည်းလမ်း (၁.Shrink! လင်.ခ်ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း ပိုက်ဆံရတဲ.နည်းလမ်း) အရင်ဆုံး Log In လိုက်ပါ။
ကြိုက်တဲ. လင်.ခ်တစ်ခု ရိုက်ထည်.လိုက်ပါ။ သီချင်းလင်.ခ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယို လင်.ခ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုက်ထည်.ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Shrink!ကို နှိပ်။ အောက်ကပုံအတိုင်း လင်.ခ်တစ်ခုတက်လာပါတယ်။ အဲဒီလင်.ခ်ကို ကော်ပီကူးလိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ. မိမိဖေ.ဘုတ်ထဲမှာညာကလစ်နှိပ်ပြီး paste နဲ. ပြန်ချလိုက်ပါ။
ခုဆိုရင် ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေး ပြီးသွားပါပြီ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က လင်.ခ်ကိုလာနှိပ်လိုက်တိုင်း မိမိက ပိုက်ဆံရပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကို နည်းပညာဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ တော်တော်များများတွေ.ရပါတယ်။ ပြည်.ဖြိုး တို.လိုဆိုဒ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော. ဒီadflyနဲ.တင် တစ်နေ. ဒေါ်လာ၂၀ အထက်တောင်ရနေကြပါပြီ။ စဉ်းစားကြည်.လိုက်လေ ဆော.ပ်ဝဲလ်လာတောင်းလုတ်လိုက်တဲ.လူတွေက တပုံကြီးပဲကို ဟုတ်တယ်မလား ... ဒီနေရာမှာ ဥပမာ လေးသွားကြည်.လိုက်ပါ။ အောက်ဆုံးမှာ ရှိတဲ. ဖေ.ဘုတ်ဆုိုတဲ. စာသားဟာ နည်းပညာဆိုဒ်မှာတွေ.ရတဲ. တောင်းလုတ်စလုံးလိုပါပဲ adfly ကို သုံးထားတာကို တွေ.ရပါတယ်။ ဒုတိယနည်းလမ်း (၂.Website Entry Script ၀က်ဆိုဒ်ဝင်တိုင်းငွေရတဲ.နည်းလမ်း) ဒီ script ကို သုံးပြီး ပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုရင်တော. မိမိမှာ ဘလော.တစ်ခုရှိထားဖို.လိုပါတယ်။ ဘလော.ပြုလုပ်နည်းကိုတော. တခြားဆိုဒ်တွေမှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်မှပဲ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ. ရေးသားပါမယ်။ ခုတော. adflyအကြောင်းပဲ ဆက်လိုက်ရအောင်။ Toolsထဲက Website Entry Scriptကို ရွေးလိုက်ပါ။ အနီရောင်ကွင်းထားတဲ. scriptကို Copyကူးလိုက်ပါ။
ခုဆိုရင် ဒုတိယနည်းလမ်း ပြီးသွားပါပြီ။ ဘလော.ကာထဲက View Blogကို နှိပ်ပြီး ဒီ script အလုပ်လုပ်ပုံကို သွားကြည်.နိုင်ပါတယ်။ တတိယနည်းလမ်း (၃.Full Page Script ဘာကိုပဲနှိပ်နှိပ် ပိုက်ဆံရအောင်လုပ်နည်း) ဒီ script ကို သုံးပြီး ပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုရင်လည်း မိမိမှာ ဘလော.တစ်ခုရှိထားဖို.လိုပါတယ်။ Tools ထဲက Full Page Scriptကို ရွေးလိုက်ပါ။ အစိမ်းရောင်ကွင်းထားတဲ. scriptကို Copyကူးလိုက်ပါ။
ခုဆိုရင် တတိယနည်းလမ်း ပြီးသွားပါပြီ။ ဘလော.ကာထဲက View Blogကို နှိပ်ပြီး ဒီ script အလုပ်လုပ်ပုံကို သွားကြည်.နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ... မသိနားမလည်တာရှိရင် ဖေ.ဘုတ်ထဲမှာ လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ Member ဝင်ပြီးအားပေးကြပါ..။
Blogger July 25, 2017 at 12:58 PM
Blogger September 12, 2017 at 7:17 PM
Blogger November 20, 2017 at 2:47 AM
Come and see how THOUSAND of people like YOU are makingaLIVING online and are fulfilling their dreams TODAY.
Blogger November 22, 2017 at 3:13 PM
Blogger November 25, 2017 at 6:49 PM
PAYING PTC /BTC SITES
PAYING P T C / B T C SITES PAID Clicks Ref. Clicks Min.Cashout Processor Payout.Time 0.01...
Paypal Account ဖွင့်နည်း နှင့် Verify ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
အခု တခေါက် ကျွန်တော် တင်ပြမှာကတော့ PayPal အကောက် လျှောက်နည်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူများ အတွက်ပါ။ ဘာဖြစ်...
Bitcoin Wallet Account တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့ Online မှာ Bitcoin ရှာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် မိမိတို့မှာရရှိလာတဲ့Bitcoin တွေကိုထုတ်ယူဖို့ သိုလှောင်ဖို့အရမ်းကောင...
PTC Site ကပိုက်ဆံထုပ်ယူနည်း (2)
PTC Site တွေမှာ DR တို့ RR တို့ဝယ်ယူနည်း (1)
Scam ဖြစ်နေတဲ့ PTC Site တွေမှာအချိန်ကုန်နေပြီလား (1)
L E G I T SITES
Copyright © Earning Online Myanmar